Accueil > Gazetin'ny nosy > Parlemantera: Depiote makorelina
Parlemantera: Depiote makorelina
Niteraka resabe teo anivon’ny fiaraha-monina Malagasy ny filazana tao amin’ny Antenimierampirenena tamin’ny fivoriana tamin’ny talata faha 13 martsa 2018 lasa teo. Ankoatra ny adilahy pôlitika izay nitranga tamin’iny fotoana iny mahakasika ny lalàm-pifidianana izay, ka nahatonga ny fifandonana ara-kevitra tao amin’ny Antenimieram-pirenena nandritra ny fotoam-pivoriana dia nisarika ny sain’ny maro koa ilay filazan’ny depiote Rabetafika Robertine avy any Isandra Fianarantsoa izay niantso an’i Mahazoasy filohan’ny fivoriana izy hoe :« Afindrao toerana any ambony any ireo mpanao gazety ireo fa maimbo helika ». Mbola nampiany ny fitenenana koa izany avy eo hoe «Izaho aloha tsy mahatanty izany fa avoahy any ireo!». Nanamarika nefa ny depiote namany fa tsy mahazo mivoaka ny mpanao gazety fa avelao izy ireo hijery ny vaovao eo.
Niara-nahita iny raharaha iny ny daholo hatramin’ny praiminisitra Solonandrasana Olivier sy ny mpikambana ao anatin’ny governemanta. Marihina koa fa nisy mpiasan’ny Antenimieram-
pirenena koa anie tonga nijery ny ady nataon’ny depiote sy ny governemanta iny, nefa dia ny mpanao gazety ihany no nolazain’ny depiote Robertine Rabetafika ho maimbo helika ka nasainy hivoaka.
Niteraka resabe iny raharaha iny nanomboka tamin’iny fotoana iny ka na ny depiote tonga teo aza dia nilaza ny sasany fa tsy fofon-kelika ihany no nisy tato (somary manao hatsikana izy ireo) fa fofon-javatra hafa koa. Misy koa ange ny depiote “makorelina” hoy ihany koa ny hafa somary manao teny fanakianana. “Samy mifankahalala izay ato”, hoy ny resaka mandeha “ka tsy mety ny zavatra toa ireny”, hoy izy ireo. Ny tena nanahirana aza dia ny tsikera nandeha taty amin’ny olona naheno iny raharaha iny hoe “tsy sahaza ny olom-boafidy iny fitenenana iny”.
Nanomboka teo dia samy nanana ny fomba filazany ny olona rehetra. Nisy ny namakafaka manokana ity depiote avy any Isandra Fianarantsoa ity. Samy nilaza ny fantany ny olona rehetra eny na tsy ny depiote aza ka nahalala azy.
Na izany na tsy izany dia misy tokoa ny depiote makorelina. Tsy iza ireo fa ireo depiote mivadibadika antoko pôlitika sy mpamadika palitao. Nanao TIM ny taona 2001 ka nisolelaka tamin’ingahy Ravalomanana Marc, nanao TGV ny taona 2009 ka nanindrahindra an’ingahy Andry Nirina Rajoelina, nivadika ho MMM ny taona 2011 ka tsy nahalala olona raha tsy Hajo Andrianainarivelo.
Amin’izao fotoana izao dia nivadika HVM indray ka mivavaka amin’ingahy Hery Rajaonarimampianina. Amin’ny taona 2019 dia hivadika inona indray ?
Izany no atao hoe depiote makorelina.
Ny mpanao gazety tsy maimbo helika